मिठो गाएर भाइरल भएका राजु गुरुङ रुदै मिडियामा, लोक स्टारले आउट गराएपछि यसो भन्छन ! – दैनिक नेपाल न्युज
मिठो गाएर भाइरल भएका राजु गुरुङ रुदै मिडियामा, लोक स्टारले आउट गराएपछि यसो भन्छन !
काठमाडौं । नेपाल लोक स्टारबाट भर्खरै आउट भएका राजु गुरुङ पहिलोपटक मिडियामा देखिएका छन । केहि समय देखि चल्दै आएको नेपालको मौलिक रियालेटी सो नेपाल लोक स्टारबाट आउट भएका छन । उनि उक्त टिममा धेरै मिठो गाउने गायक भित्र पर्छन जसले सबैको मन जितेको थियो।
नेपाल लोक स्टारमा उनि सहित धेरै आस गरिएको प्रतिभाहरु बाहिरिएका छन । भोटकै कारण बाहिरिएका राजु गुरुङ भन्छन’ म जस्तो अभागी कोहि छैन’ उनि नेपाली मौलिक गीत गाउने एक गायक पनि हुन् । उनले गाएको केहि गीतहरु हिट लिष्टमै छन भने केहि गीतहरु खासै चलेनन।उनि संग कमल सरगमले गरेको कुराकानी हेरौ :
सुन्दरी बलिउड नायिका विद्या वालनका फ्यानका लागि खुशीको खबर !